> Resource > Windows > Sida loo rakib Windows 7 on SSD
"In SSD midig, laakiin ku guuldareystay inuu soo dajiyo Windows 7 waa ku, waxa habboon in aan sameeyo?" Dad badan ayaa waxa ay ku dooneysaa su'aal isku mid online xal. Halkan qodobkan idin tusiyo laba siyaabood oo loo soo dajiyo Windows 7 on SSD soo socda.
Xalka 1: Ku xiridda Windows 7 on SSD rakibidda disk
Habka ugu horeysay si loo soo dajiyo Windows 7 on SSD waa in la isticmaalo a Windows 7 rakibidda disk. Waxa kaliya la mid ah sida ay ku rakibidda ku wadid aad caadi u adag marka laga reebo hal wax oo aad u baahan tahay si ay u tagaan aad PC ee BIOS iyo bedesho goob drive adag.
Ka hor inta aadan u socoto si loo soo dajiyo Windows 7 on your computer, fadlan geli aad PC ee BIOS bedesho goob drive adag waxaa ka mid ah. Kombiyuutaro caadi ahaan u qotonsaday inay isticmaalaan Serial Lifaaqa Technology Advanced? In lifaaq drives adag. Laakiin iyadoo SSD, waxaad u baahan tahay in la beddelo Sata in Advanced HostController interface. Caadi ahaan Windows 7 ama Windows Vista aan ku shuban doonaa wadayaasha ee nidaamka kaydinta in aan la isticmaalin, sidaas darteed haddii aad beddesho ka Sata in AHCI ma ku shuban doonaa darawalka Msahci.sys loo baahan yahay in la akhriyo SSD ah. (Eeg Microsoft ee FixIt iswada.)
Ka dib goobta, waxaad ku rakiban kartaa Windows 7 on SSD sida caadiga ah haatan.
Xalka 2: Ku xiridda Windows 7 on SSD la korontada
Haddii aadan haysan Windows 7 rakibidda disk ama aad rabtid inaad u guurto Windows 7 ilaa SSD ka kale HDD in ay sii kuu gaar ah, waxaad u baahan tahay utility PC ah in ay ku caawiyaan, sida Wondershare WinSuite 2012 , nooc ka mid ah Windows 7 qalab cloning . Waxaa kuu saamaxayaa inaad u guurto Windows 7 ilaa SSD markii hore.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta cloning Windows 7 ilaa SSD, waxa kale oo aad u baahan tahay si ay u tagaan aad PC ee BIOS iyo beddelo drive adag dejinta sidii xal kor ku soo sheegnay.
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka on your computer, waxay u ordaan oo waxaad tagtaan dalka "Management Disk" doorasho. Markaas waxaad heli doontaa interface ee soo socda.
Haddii Windows 7 waa lagu rakibay xijaab gaar ah, waxaad dooran kartaa "Gadzhiyev oo ka mid ah Barzakh,". Haddii aan ku rakiban in xijaab laakiin disc oo dhan, waxaad bedelan kartaa in "Disk Dhan Gadzhiyev". Labada iyaga ka mid ah waa la mid, kaliya ka duwan awoodda disk ah. Next, aynu isku day la mid ah hore.
Step1. Dooro xijaab isha
Dooro disk iyo Barzakh, halkaas oo Windows 7 caasimadii. Markaa waa inaad aadaa "Next".
Step2. Dooro xijaab caga / disk ah
Dooro SSD (Ha iloobin in aad xerto kombiyuutarka :)). Your SSD waa in ay leeyihiin awood ka badan isha xijaab / disk ah, ama aan laguu oggolayn in ay tagaan tallaabada xigta. Markaasuu ku biiro "Next".
Step3. Ku bilow u dhaqaaqin Windows 7 ilaa SSD
Halkan waxaad ka heli doontaa fariin xusuusin in howlgalka overwrite lahaa content ku saabsan SSD. Haddii aanay jirin xog muhiim ah ku jira waxaa ku, guji "Haa", iyo ku rakibidda on Windows 7 SSD bilaabmin.
Marka cloning ka baxayo, waxaa jiri doona a "guul gjærceler!" pop-up fariin, oo aad guurtay Windows 7 si aad SSD!
SSD Gadzhiyev: Sidee si ay u gudbiyaan Barzakh, digsi, HDD ama SSD in SSD in Windows 8/7 / VIS